Mpanamboatra sy mpamatsy ny mari-pana - mpamokatra hafanana mpamokatra mari-pana
1.This Controller dia mety amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fitehirizana mangatsiaka antonony sy ambany;
2.Izany dia afaka refesina, aseho, hifehezana ny mari-pana, amin'ny fiasan'ny temp. calibration, defrost voatery, mihoatra ny temp. fanairana sy fanairana tsy fahombiazan'ny sensor, fanarenana fanalahidy iray amin'ny sandan'ny toerana misy ny orinasa, ny parètre preset ary ny fanarenana key iray;
3.It dia mandray ny famolavolana fanalahidy miaraka amin'ny laharana fanidiana hidin-trano;
4.Fampidirana sensor iray fomba: sensor an'ny mari-pana amin'ny kabinetra (Pb1) .Fivoarana fanaraha-maso indroa: Refrigeration sy defrost.
Ny mpanara-maso ny hafanana EK-3030 dia ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana ara-barotra
4.Fampidirana sensor roa: sensor an'ny mari-pana amin'ny kabinetra sy sensor amin'ny hafanana defrost. Fivoarana fanaraha-maso telo fomba: Refrigeration, defrost ary fan.
Ny mari-pahaizana momba ny haitao sy ny hamandoana teknolojia vaovao namboarina JSD-100 +
Fandrefesana sy fifehezana ny mari-pana;
Fanamafisana ny mari-pana;
Fiarovana fanemorana ny fanombohana;
Ampidiro tenimiafina hanitsiana ny masontsivana.
Ny faritra mangatsiaka mangatsiaka termostat ETC-200 +
Fanairana rehefa mihoatra ny temp.limit;
Mifamadika eo amin'ny vata fampangatsiahana sy fanafanana;
Teknolojia vaovao tsy mitahiry rano mangatsiaka fitehirizana thermostat ETC-961
Fitaovana fampangatsiahana sy fanala;
Fiverenana fanaraha-maso miiba, famaritana ny mari-pana 0,1 ℃;
Fampiasana fanairana maro.
Ny fampangatsiahana endrika vaovao sy ny fiovan'ny toetr'andro fanala hafanana ETC-974
Refrigeration, defrosting, maodely marobe fanaraha-maso fanaraha-maso tsy voatery;
Ny vata fampangatsiahana amin'ny vidiny ambany sy ny thermostat maloto ETC-3000
Ny orinasanay dia manampahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana sy fivarotana ny mpanara-maso ny mari-pana microcomputer ary ny mpanara-maso ny hamandoana. Ny puce ampiasaina amin'ny mpanara-maso ny mari-pana dia manana fahombiazana maharitra, asa feno, fiarovana maro, famolavolana drafitra mandroso sy antonony ary fanodinana dingana ary ny haavo teknika dia mandroso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mitarika eo an-toerana. Ity vokatra ity dia manana rindrambaiko maro isan-karazany eo amin'ny sehatra sy indostrian'ny hatsiaka sy ny vata fampangatsiahana ary ny refy ...
Ny faritra mangatsiaka fitehirizana sy fifehezana ny hamandoana JSD-100 +
Ity vokatra ity dia nampiasa hifehezana ny hamandoana, fahamendrehana avo lenta ary fitoniana maharitra maharitra, sns;
Azo ampiasaina betsaka amin'ny milina mando, dehumidifier, hamandoana amin'ny rivotra;
Amboary ny fanaraha-maso ny hamandoana an'ireo milina sy fitaovana hafa;
Azo ampiasaina amin'ny fandrefesana ny hamandoana sy ny fampisehoana.
Sehatra fanodinana nomerika avo lenta avo lenta STC-100A orinasa mpamokatra
Ampifamadiho ny maody eo anelanelan'ny fanafanana sy ny vata fampangatsiahana
Mifehy ny mari-pana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny sanda fametrahana ny mari-pana sy ny sandan'ny fahasamihafana
Fanemorana ny fiarovana rehefa manomboka ny vata fampangatsiahana sy ny fanafanana
Fero ny haavon'ny mari-pana
Alaharo ny mari-pana
Fanairana rehefa diso ny sensor
Namboarina ho an'ny vata fampangatsiahana 220v STC-1000
Ampifamadiho ny maody eo anelanelan'ny hatsiaka sy ny hafanana;
Mifehy ny mari-pana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny sanda fametrahana ny mari-pana sy ny sandan'ny fahasamihafana;
Fiarovana fanemorana output output;
Fanairana rehefa mihoatra ny fetran'ny mari-pana ny maripana na rehefa tsy mety ny sensor.
fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, fanaraha-maso ny mari-pana incubator, thermometer nomerika, nomerika nomerika mpanara-maso, fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny hafanana, thermometer nomerika Aquarium,